Plotter စက်ရုံဖြတ်တောက်ခြင်းအဝတ် | တရုတ်အဝတ်အစား, ပေးသွင်း Plotter ထုတ်လုပ်သူများဖြတ်တောက်ခြင်း
Plotter ဖြတ်တောက်ခြင်း Box ကိုပုံစံများ
plotter ဖြတ်တောက်ခြင်းပစ္စည်း roll
အပ်ချုပ် Template ကိုဖြတ်တောက်ခြင်းစက်
စက်မှုဝန်ကြီးဌာနဖြတ်တောက်ခြင်းစက် Advertising ကြော်ငြာ & ထုပ်ပိုး
Advertising ကြော်ငြာဒစ်ဂျစ်တယ်ဖြတ်တောက်ခြင်း plotter
UNOCUT: နည်းပညာတက္ကသိုလ်လုပ်ငန်းစဉ်: အအသိဉာဏ် CAD လုပ်ခြင်း, စာစီ software နှင့်လက်ရှိရေပန်းစား 3D ခန္ဓာကိုယ်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့စနစ်အားအဆင့်မြင့်တဆင့် RUK Flexible ပစ္စည်း MCC စီးရီး CNC ဖြတ်တောက်ခြင်းစနစ်,: ဖောက်သည်အလို့ငှာ→ CAD နမူနာအမြောက်အများထုတ်လုပ်မှုကုန်ပစ္စည်းမိတ်ဆက်→ (Computer ကို battledore) → RUK UNOCUT →နမူနာအဝတ်ကိုအတည်ပြုခြင်း လူ့ထက်ပိုပြီးအချိန်မြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်, ချွေတာထိုကဲ့သို့သောတိကျထှကျဖြတ်ဖို့ရှအဖြစ်စာရွက်စာတမ်းအပြောင်းအလဲနဲ့, များအတွက်ဆော့ဖ်ဝဲ။ အနာဂတျမှာစက်မှု 4.0 စံထုတ်ကုန်။ MCC02 ...
RUK Dual-Head CNC ဓါးအထည်ဖြတ်စက် / သားရေ
စက်-MC03 ဖြတ်တောက်ခြင်းအပ်ချုပ် Template ကို
စက်-MC02 ဖြတ်တောက်ခြင်းအပ်ချုပ် Template ကို
အင်္ဂါရပ်များ: 1. စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များပထမဦးဆုံးဓါး function ကို, ဓားအတိမ်အနက်ကိုချိန်ညှိအလိုအလျောက်ပစ္စည်းများ၏အထူအရသိရသည်။ သေးငယ်တဲ့နမူနာထိစိမ့်၏ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးရန် 2. အလိုအလျောက် partition ကိုအားကောင်းတဲ့စုတ်ယူခြင်း။ လျင်မြန်သောဖြတ်တောက်ခြင်း, နမူနာ template ကိုချောမွေ့စုံလင် convergence အောင်မြင်ရန် 3. High-Speed ​​ကိုဦးခေါင်း။ ,4အထည်ချုပ် template ကိုသင်ယူရန်လွယ်ကူရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်, လုံးဝအပ်ချုပ်အဝတ်အစား၏ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေး,5ကိုမဆို CAD software ကိုချိတ်ဆက်ထားနိုင်, ကျယ်ပြန့်အဝတ်အစား, အိတ်, ကြော်ငြာပုံနှိပ်ခြင်းအတွက်အသုံးပြု ...
စက်-MC01 ဖြတ်တောက်ခြင်းအပ်ချုပ် Template ကို
အင်္ဂါရပ်များ: 1. စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များပထမဦးဆုံးဓါး function ကို, ဓားအတိမ်အနက်ကိုချိန်ညှိအလိုအလျောက်ပစ္စည်းများ၏အထူအရသိရသည်။ သေးငယ်တဲ့နမူနာထိစိမ့်၏ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးရန် 2. အလိုအလျောက် partition ကိုအားကောင်းတဲ့စုတ်ယူခြင်း။ လျင်မြန်သောဖြတ်တောက်ခြင်း, နမူနာ template ကိုချောမွေ့စုံလင် convergence အောင်မြင်ရန် 3. High-Speed ​​ကိုဦးခေါင်း။ 4. အထည်ချုပ် template ကိုသင်ယူရန်လွယ်ကူရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်, လုံးဝအပ်ချုပ်အဝတ်အစားများ၏ပြဿနာကိုဖြေရှင်း။ 5. ကျယ်ပြန့်အဝတ်အစား, အိတ်, ကြော်ငြာပုံနှိပ်ခြင်းအတွက်အသုံးပြုမဆို CAD software ကိုချိတ်ဆက်ထားနိုင် ...
UNOCUT: နည်းပညာတက္ကသိုလ်လုပ်ငန်းစဉ်: အအသိဉာဏ် CAD လုပ်ခြင်း, စာစီ software နှင့်လက်ရှိရေပန်းစား 3D ခန္ဓာကိုယ်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့စနစ်အားအဆင့်မြင့်တဆင့် RUK Flexible ပစ္စည်း MCC စီးရီး CNC ဖြတ်တောက်ခြင်းစနစ်,: ဖောက်သည်အလို့ငှာ→ CAD နမူနာအမြောက်အများထုတ်လုပ်မှုကုန်ပစ္စည်းမိတ်ဆက်→ (Computer ကို battledore) → RUK UNOCUT →နမူနာအဝတ်ကိုအတည်ပြုခြင်း လူ့ထက်ပိုပြီးအချိန်မြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်, ချွေတာထိုကဲ့သို့သောတိကျထှကျဖြတ်ဖို့ရှအဖြစ်စာရွက်စာတမ်းအပြောင်းအလဲနဲ့, များအတွက်ဆော့ဖ်ဝဲ။ အနာဂတျမှာစက်မှု 4.0 စံထုတ်ကုန်။ MCC03 ...
သင် ... လုပ်ပါသလား မင်းရဲ့ TORUI ကိုငါတို့
©မူပိုင်ခွင့် - ၂၀၁၀-၂၀၁၈ ။